I-Bethany College Yamkelwa: Iindleko, izikolo ze-SAT kunye nokunye
I-Bethany College (West Virginia)
I-Bethany College Admissions Overview:
IBhetani ivulekile ngokubanzi, ivuma malunga ne-65% yabenzi-sicelo. Amanqaku okuvavanya yinto efunekayo yesicelo saseBhetani, kunye ne-SAT kunye noMthetho owamkelekileyo. Abafundi bangazalisa isicelo kwi-intanethi, baze bathumele esikolweni esiphakamileyo kunye neencwadana zinconywa ezivela kwisikhokelo somcebisi. Ukwamkelwa eBhethani "kukuqhaqha," oku kuthetha ukuba umfundi unokufaka isicelo sokungena kwi-semester yokuwa okanye i-spring.
Abafundi bakhuthazwa ukuba batyelele i-campus, okanye baqhagamshelane ne-ofisi yokungeniswa nabo nangayiphi na imibuzo abanayo.
I-Bethany College Ukwamkelwa kweeKholeji: 65%
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 380/500
ISAT Math: 380/500
UMTHETHO UMathe: 16/23
I-Bethany College (West Virginia) Inkcazo:
Ikholeji endala eWest Virginia, iBethany College yasungulwa ngowe-1840. Ekhompasini yaseNtshonalanga yaseVestinia, idolophu yaseBhetani isondelene kakhulu ne-Ohio kunye nePennsylvania-ePittsburgh iyure nje kuphela. Beka phakathi kweenduli zePlateau yase-Allegheny, iBhetani inika abafundi indawo yokuthula yendalo, kunye nezixeko ezinkulu kunye neenkcubeko eziseduze.
I-Bethany College inikezela ngeentlobo zee-Majors zabafundi ukuba zikhethe ukusuka-umfundi unokudala yakhe eyona nto, ukuba akukho nanye inikwe indawo yakhe.
Iibhasoni zincintisana kwiNgqungquthela ye-NCAA ye-Division III yeNtlalontle, kwaye kukho amathuba amaninzi abafundi ukuba bathathe inxaxheba kumaqela ezemidlalo kwi-campus. Imidlalo evelele ibandakanya ibhola lebhola, i-softball, umkhondo kunye nenkundla, ukubhukuda, kunye nebhoksi. Ukusuka kwiiklabhu kunye nemibutho, ukuya kwiminikelo eyahlukeneyo yemfundo, ukuya kwiidolophu ezinkulu, iBeithani College inento yokunika wonke umntu.
Ubhaliso lwabonke: 680 (645 izifundo zakudala)
Ukuhlukana kwesini: 61% Amadoda / 39% Abesetyhini
Isifundo kunye neMali: $ 27,696
Igumbi neBhodi: $ 9,924
Ezinye iindleko: $ 2,600
Iindleko ezipheleleyo: $ 41,220
I-Bethany College Financial Aid (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 17,007
Imali: $ 5,869
I-Popular Majors: I- Psychology, uLonxibelelwano, uLwazi loLwazi, uLwazi, iKhemistry, iBiology, Accounting
Imidlalo Yabantu: Ibhola, Umkhondo kunye neNgingqi, i-Baseball, iGalofu, iLacrosse, iConcer, iTennis, Ukubhukuda nokuDoba
Ezemidlalo zaBasetyhini: I- Softball, iConcer, iVolleyball, iHockey yeHlabathi, iBhola lebhola, iGalofu, Ukubhukuda kunye nokuDoba, I-Track and Field
Ukuba uthanda i-Bethany College, Unokuthi uthanda ezi zikolo:
Ezinye iikholeji ezinkulu (ezincinci) eWest Virginia ziquka iYunivesithi yaseAlderson Broaddus , i- Davis ne-Elkins College , i- Wheeling Yunivesithi yaseJesuit , ne- University of Salem International .
Kubafundi abanomdla esikolweni ngeenkqubo ezinkulu zezemidlalo, ezinye izikolo kwiNgqungquthela yeMidlalo kaMongameli ziquka iYunivesithi yaseChatham , iKholeji yaseThiel , iWashington kunye neJefferson College , i- Grove City College kunye ne- Westminster College .
IYunivesithi yaseRhode Island (URI)
Kutheni i-Archangel Gabriel ilawula iMigangatho yamanzi
I-Ornithopod i-Dinosaur Imifanekiso kunye neeprofayili
Le Mifanekiso Ehlekisayo Iya Kukuthi "I-NOPE!"
UbuYuda be-Ultra-Orthodox: uSatmar Hasidim
Iifomfa ze-Idiomatic zesiFrentshi nge 'Mal'
I-Vardon Grip (Ebizwa ngokuba yi-Grip Overlapping Grip)
Imfazwe yokuqala yeSino-Japanese